Global Aawaj | » फुटबलरबाट बडीबिल्डर भएका रमेशनाथ खनाल गुरुको कथा फुटबलरबाट बडीबिल्डर भएका रमेशनाथ खनाल गुरुको कथा – Global Aawaj
इतिहासको खोज भाग- १
फुटबलरबाट बडीबिल्डर भएका रमेशनाथ खनाल गुरुको कथा
नेपालमा शारीरिक सुगठनको इतिहास केलाउने क्रममा थिए। रमेशनाथ खनाल गुरुलाइ सो बिषयमा राम्रो जानकारी छ भन्ने थाह पाए पछी वहांलाइ भलाकुसारी गर्ने मेसो मिलाए । कुराकानीका क्रममा खनाल गुरुले आफु पहिला एक कुशल फुटबल खेलाडी भएको बताए । उनले धरानमै रहेर धेरै खेल खेले । फुटबलमा उनी धरानको अञ्चलस्तरीय खेलाडी थिए ।
वि.सं. २०२४ मा धरानमा भएको खेलाडी छनोट कार्यक्रममा आफु असफल भए पछि दुखि बनेर बसेका बेला एक जना साथी आएर ‘एउटा राक्षस जस्तो मानिस देखें ।’ त्यसको हातखुट्टा यति मोटामोटा छन् । छाती पनि यति ठूलो छ ।’ भन्दै त्यसको बयान गर्यो । नभन्दै पुलिस क्याम्प पुग्दा थाहा भयो ती व्यक्ति मिस्टर सिंगापुर भइसकेका बडिबिल्डर धनकुटा घर भएका गणेश प्रधान छुट्टीमा घर आएका रहेछन् । उनलाई गुरु बनाएर शारीरिक सुगठन (बडिबिल्डिङ) छ महिना बडिबिल्डिङ प्रशिक्षण लिए । कलकत्ताबाट सामानहरु मगाएर धरानको पृथ्वीमार्गमा डाँफे जिम्नाजियम युथ क्लब सञ्चालनमा आयो । वि.सं. २०२५ सालताका दुई वर्ष प्रशिक्षण लिएपछि वि.सं. २०२७ सालमा डाँफे जिम्नाजियम युथ क्लबको आयोजनामा मिस्टर धरान प्रतियोगिताको आयोजना भएको थियो ।
नेपालमा यो नै पहिलो शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता हुनु पर्छ । उनले ‘मिस्टर धरान’ को उपाधि नै हात पारे । गणेश प्रधानको निर्णायकत्व मा ६ जना सहभागी उक्त प्रतियोगितामा गोपी पौडेल मि अब्डर्मिनल डि के मुखिया मि आर्मस उपाधि जितेको उनी सम्झन्छन् । आज पनि धरान जाँदा उनी मिस्टर धरानकै नामले चिनिन्छन् । उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि उनि पछि काठमाडौं छिरे । तत्कालिन समयमा ग्रिसका पावर लिफिङ्ग प्रेमी एन्थोनी जो घुम्न नेपाल आएका थिए । जस्ले आफुसग थुप्प्रै खेल सामग्री लिएर आएका थिए । उनीसंग निरन्तर व्यायाम गर्ने शुरु गरे । वि सं. २०३० सालमा ठमेलमा रधु बन्तको सक्रयतामा एमेच्युर एथ्लेटिक्स युनियन क्लबको आयोजनामा मिस्टर काठमाडौं शारीरिक सुगठन आयोजना भएको थियो । सो प्रतियोगितामा भारतको मद्रासबाट आएका खेलाडी हेनरी बबी प्रथम, रधु बन्त दोश्रो र उनी तेस्रो भए । पछि उनी नेसनल ट्रेडिङमा जागिरे भए ।
जागिरको शिलशिला उनी नेपालभरि जहांजहां पुग्थे शारीरिक सुगठनको प्रचार प्रसार गर्ने गरेको उनले बताए । एक पटक जाडोको बेला मन्त्रीसँग हुम्ला गएको बेला साँझ पख शरीरको प्रदर्शन गरेको र भोलिपल्ट सबैले उनलाई राक्षस सम्झेर बजार बन्द गरेको प्रसंग उनले हांस्दै सुनाए । जागिरको अवधिमा उनले स्पोर्टस साइकोलोजीमा एमएस गर्ने नेपाल सरकारको प्लानमा युरोप समेत गएको उनले बताए । उनले वल्र्ड क्लास निर्णायकको मान्यता पाएपछि सन् १९७८ मा जापानमा आयोजना भएको मिस्टर युनिभर्सको निर्णायक भएका थिए । त्यसबेला हालका हलिउड अभिनेता आर्नोल्ड श्वाजनेगर मिस्टर युनिभर्स घोषित भएका उनले बताए ।